Wepamusoro 6 Hutano Mubatsiro weReveratrol Supplements （Yakazara kwazvo comprehensive
musha > Resveratrol Supplements
Wepamusoro 6 hutano Kubatsira kweReververrol Supplements
Kana iwe uchitsvaga kwekutenga Resveratrol poda muhuwandu, iyo imwe kambani yaunogona kuvimba nayo nekutsvaga zvisvinu zviri Cofttek. Iyo kambani, nekuda kwechikwata chayo chakasimba chekutsvaga uye nedhipatimendi rekutengesa rakazvitsaurira, yakagadzira huvepo hwepasirese mune inguva pfupi chete - ine vatengi uye vanobatirana pasirese. Iyo resveratrol inogadzirwa nekambani inouya mumabatch makuru e25 kgs uye inotorwa kubva kune epamusoro-soro zvigadzirwa, nekudaro ichivimbisa kuti zvinowedzerwa zvinogadzirwa kubva kwazviri zvinogona kuvimbwa zvemhando uye kushanda. Kana iwe uchida kutenga resveratrol muhuwandu, iyo chete nzvimbo yekutenga iri cofttek.com.
Resveratrol (501-36-0) chinhu chinonzi polyphenolic chinowanikwa muzvirimwa zvakawanda asi kazhinji mumazambiringa. Resveratrol inowanzozonzi 'stilbene' nekuda kwechimiro chayo uye ndiyo inonyanya kufarirwa stilbene. Stilbenes ndiwo makomputa emiti anowanzo kuwanikwa mumhuri yemazambiringa kunyangwe iwo achigona kuvapo mune zvidiki zvidiki mune zvimwe zvirimwa zvakare. Mukati memazambiringa, resveratrol inowanikwa muganda uye inoshanda se phytoalexin kana chepfu yekudyara, kudzivirira mazambiringa kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana.
Kwemakore mazhinji, vaongorori vakaramba vachishamiswa nekukwanisa kwevanhu veFrance kudya chikafu chakazara mumafuta akazara asi vachiramba vasingabatwe nezvirwere zvecoronary. Vanhu vazhinji vanofunga kuti resveratrol ndiyo mhinduro kune iyi 'French Paradox' yeMoyo Chirwere. Muchokwadi, waini tsvuku inoita diki diki mukugonesa iyi 'French Paradox'. Kudya uye mararamiro ndizvo zvakakosha zvinhu.
Idzo nyika uko kunwa waini tsvuku kunofarirwa, huwandu hwevanhu hunowanikwa kuti hunodya kusvika ku0.2 mg ye resveratrol mazuva ese. Nekudaro, munyika zhinji umo waini tsvuku isingasarudzwe seSpain kana North America, huwandu hwevanhu hunowanzoshaya resveratrol. Vagadziri, kutenderera pasirese, saka vari kuuya ne resveratrol zvinowedzera izvo zvinovimbisa akati wandei marubatsiro ehutano kamwechete.
Mubvunzo ndewakuti: kodi resveratrol ine simba sezvo izvi zvinowedzera zvinoti ndizvo? Ngatitarisei zvimwe zvekushandisa kweververatrol.
Nei Tichida Resveratrol?
Waini tsvuku inoderedza cholesterol, chokwadi vazhinji vedu tinoziva. Zvisinei, havazi vazhinji vedu vanoziva kuti ndicho chirimwa chemubatanidzwa resveratrol chinopa chero tsvuku waini iyi chivakwa. Pamwe chete newaini tsvuku, resveratrol inowanikwa mune zvimwe zvakawanda zvekudya. Resveratrol (501-36-0) yakatanga kusarudzika mu1939 uye nekufamba kwemakore, tsvagiridzo yakaitwa pachikamu ichi yakaratidza mabhenefiti ayo akasiyana ehutano, ayozve, akatungamira mukuwedzera kudiwa kwechikamu ichi. Zvimwe kunze kwekudzikisa cholesterol, resveratrol inozivikanwa zvakare kuti iwedzere kugadzirisa mashandiro uye kugadzirisa BP.
Muchinyorwa chino chakajeka pane resveratrol, tinokurukura zvakunobatsira, kushandisa, uye nekuchengetedza dosi pamwe nekukupa zano pamusoro peakanakisa resveratrol supplement ye2021 pamwe nekutenga nzvimbo yekudyara iyi yakawanda. Nekudaro, ngatitangei nezvakadzika pekutanga.
Ndeapi mabhenefiti eesveratrol?
① Iyo Inodzikisira Iko Kumanikidza Ropa
Muna 2015, ongororo yakaratidza kuti yakakwira dosi resveratrol inoderedza iyo systolic yeropa iro ratinoona senhamba yepamusoro pakuverenga kweropa. Yakakwira systolic BP inofungidzirwa kutyisidzira hupenyu hwemunhu sezvo ichiwedzera njodzi yezvirwere zvemwoyo mumunhu. Resveratrol inoderedza kukanganiswa kweropa nekugadzira yakawanda nitric oxide, iyo, zvakare, inoita kuti tsinga dzeropa dzive dzakasununguka. Kunyangwe paine humbowo hwakakwana hunoratidza kuti resveratrol inoderedza kumanikidza kweropa, kumwe kutsvagurudza kunofanirwa kuitwa maererano nedosi chaiyo. (1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos,
② Inozivikanwa nekusimudzira hutano hwepfungwa
Zvidzidzo zvakaitwa pamusoro pemakore zvakaratidza kuti kugara waini tsvuku kunwa zvakanyanya kunodzora zera-kunokonzeresa kugona kwekuziva. Izvi zvinonyanya kukonzerwa ne resveratrol iripo muwaini tsvuku. Resveratrol ine anti-kupisa uye anti-oxidant zvivakwa uye inotadzisa kushanda kwe beta-amyloid, ayo anokonzeresa kutanga kweAlzheimer's.
Ver Resveratrol Inonyanya Kubatsira Kune vanhu vane Chirwere cheshuga
Mumakore mashoma apfuura, dzinoverengeka mhuka mhuka dzakaitwa kuti dzidzidze maitiro ezvokudzokorora kwechirwere cheshuga. Mune mhuka, resveratrol inowedzera insulin kunzwa uye inomira kushanda kweiyo enzyme inotarisira kushandura glucose kuva sorbitol. Sorbitol iri shuga rinotungamira kune oxidative kusagadzikana uye inokonzera matambudziko muvanhu vane chirwere cheshuga. Izvo zvakasiyana, masayendisiti anotenda kuti resveratrol inoshanda AMPK, puroteni iyo inogaya glucose, zvakare, ichideredza zinga re shuga mukati memuviri.
④ Inogona Kudzvinyirira Maseru eCancer uye Inogona Kuwedzera Hupenyu hweVanhu
Tsvagurudzo yakaratidza kuti resveratrol inogona kutadzisa kukura kwemasero emukenza mukati memuviri nekushandurwa kweshini yekutaura kwemasero ekenza. Kunyanya kukosha, zvidzidzo zvemhuka zvakaratidzawo kuti resveratrol inhibisa kupararira kweanodzvinyirira-anotarisana nemakoneni nekuvhiringidza nzira iyo mamwe mahormone anoratidzwa.
Saizvozvowo, iyo-yehupenyu-inowedzera mhedzisiro yeververatrol yave iri nyaya yekukurukurirana kukuru pakati pevasayenzi. Muzvidzidzo zvakawanda zvemhuka, resveratrol yakawedzera hupenyu hwehupenyu hwemhuka yakasarudzwa nekumisa mamwe majini anozivikanwa kurwisa uye kuramba kure nezvirwere zvinoenderana nezera. Masayendisiti anotarisira mhedzisiro yakafanana muvanhu. Nekudaro, kutsvagisa kwakawanda kunodiwa.
Is Ndiyo Mushonga Unobudirira weArthritis uye Joint Pain
Resveratrol ndiwo mushonga unoshanda unorwisa vaviri arthritis uye marwadzo akabatanidzwa. Iyi inomera-yakagadzirirwa pombi inodzivirira muviri kubva pakubatanidzwa aches uye arthritis nekudzora kudzora kwe cartilage. Zvimwe zvidzidzo zvemhuka zvakaratidzawo kuti resveratrol inochengetedza majoini nekudzikisa kuzvimba.
⑥ Inopa Kudzivirirwa Pazvirwere zvemoyo
Resveratrol inodzivirira mwoyo nenzira dzinoverengeka dzakasiyana. Zvidzidzo zvemhuka zvakaratidza kuti pombi iyi inodzivirira kubva kuzvirwere zvemoyo nekumisa kushanda kweiyo enzyme, iyo yakabatana nekugadzirwa kwecholesterol. Zvinotonyanya kukosha, sezvo resveratrol ine antioxidant zvivakwa, iyo inoderedza oxidation yeLDL cholesterol, iyo inonyanya kuita plaque buildup mumadziro e-artery.
Iko Resveratrol yakanaka kune yako chiropa here?
Yakapa kudzivirira kwechiropa pakukuvara kwemakemikari, cholestatic, uye doro. Resveratrol inogona kugadzirisa glucose metabolism uye lipid chimiro uye kudzikisa chiropa fibrosis uye steatosis. Uyezve, yaigona kushandura hepatic cell fatty acid yakagadzirwa.
Ndezvipi zvekudya zvakaomarara pachiropa?
6 chikafu chekudzivirira kana iwe une mafuta chiropa
Doro ndicho chinonyanya kukonzera mafuta chiropa chirwere pamwe nezvimwe zvirwere zveropa.
Yakawedzera shuga. Gara kure nezvikafu zvine shuga senge zvihwitsi, makuki, masoda, uye majusi emichero.
Zvikafu zvakakangwa. Aya akakora mumafuta uye macalorie.
Chingwa chena, mupunga, uye pasita.
Ndingaite sei kuti chiropa changu chisimbe?
13 Nzira dzeChiropa chine hutano
Chengetedza huremu hune hutano.
Idya kudya kwakaringana.
Dzidzira nguva dzose.
Shandisa doro zvine mutsigo.
Dzivisa kushandisa zvinodhaka zvisiri pamutemo.
Dzivisa tsono dzakasvibiswa.
Wana kurapwa kana iwe ukasangana neropa.
Usagovana zvinhu zvehutsanana.
Dzidzira bonde rakachengeteka.
Hands geza maoko ako.
Tevera mazano pamusoro pemishonga yose.
Resveratrol yakanaka kune itsvo here?
Resveratrol inogona kudzivirira kukuvara kwetsvo, kusanganisira chirwere cheshuga nephropathy, chinodhaka-chinokonzeresa kukuvara kwetsvo, aldosterone-inokonzereswa kukuvara kwetsvo, kukuvara kweschemia-reperfusion, sepsis-inokonzerwa neitsvo kukuvara, uye itsvo yakavharidzirwa, kuburikidza neayo antioxidant mhedzisiro uye SIRT1 activation.
Peanut butter ine resveratrol here?
Peanut Butter: Peanut butter yakakosha pakupfekedza maapuro uye celery, asi zvakare ine imwe resveratrol (inosvika. 13 mg pamukombe). Peanut butter ibhuku guru reiacin uye manganese.
Resveratrol inobatsira iwe kurasikirwa uremu here?
Pakazara, iyo yazvino meta-ongororo yakaratidza kuti resveratrol kudya kwakadzora zvakanyanya huremu, BMI, WC uye mafuta mashoma, uye zvakanyanya kuwedzera kuonda, asi hazvina kukanganisa leptin uye adiponectin mazinga.
Chii chinonzi Resveratrol kuita kune ganda?
Resveratrol inogona nyore kupinda mukati meganda rinodzivirira uye nekushomeka kudzora kukwegura kweganda. Resveratrol zvakare ine anti-kupisa, anti-microbial, uye antioxidant zvivakwa, nokudaro ichichengetedza ganda rako riine hutano uye rakasununguka kubva pakuputika uye kuzvimba.
Ndeipi waini ine yakanyanya kuwanda resveratrol?
Resveratrol inosanganiswa zvakanyanya nemazambiringa matsvuku uye waini tsvuku inogadzirwa kubva emazambiringa. Waini dzakadai seMalbec, Petite Sirah, St. Laurent naPinot Noir vane resveratrol yepamusoro.
Resveratrol inowedzera simba here?
Resveratrol yakatsanangurwa sekuteedzera macalorio ekudzvinyirira, zvichitungamira mukuvandudzwa kwekurovedza muviri mashandiro uye insulin senzwi (kuwedzera simba remagetsi), pamwe nekuve nemafuta emuviri-kudzikisira maitiro nekudzivisa adipogenesis, uye kuwedzera lipid kuunganidza mune adipose tishu
Resveratrol yakaderera BP?
Resveratrol inomiririra kudzikisira kweropa nekushamisa kunokonzera mapuroteni oxidation, kunyanya panguva dzekushushikana kweiyo oxidative, mashandiro anogona kunge ari maitiro akajairika emakemikari e antioxidant.
Ndezvipi zvekudya zvakakwirira mu resveratrol?
Iwe unogona kutotora uwandu hwakaringana hwe resveratrol. Inowanikwa mune zvekudya senge nzungu, pistachios, mazambiringa, waini tsvuku uye chena, bhuruu, cranberries, uye kunyange cocoa uye chokoreti yakasviba. Zvirimwa zvinobva izvo zvekudya izvi zvinogadzira resveratrol kurwisa hutachiona hutachiona, ultraviolet radiation, kushushikana, uye kukuvara.
Ndezvipi chikafu zvine quercetin yakanyanya?
Quercetin inowanikwa mune zvakawanda mumaapuro, huchi, raspberries, hanyanisi, mazambiringa matsvuku, cherries, michero yemucitrus, uye miriwo yakasvibira yemashizha. Pakati pemiriwo nemichero, quercetin zvemukati zvakanyanyisa mueiii. Ruvara rwegirobhu nerudzi zvinoita kunge chinhu chinotarisisa chequetetin kuiswa mueiii.
Resveratrol inowedzera testosterone here?
Vatsvagurudzo vakawana huwandu hwese hwe testosterone hwakadonha ne23.1 muzana pakati pevakadzi vakagamuchira resveratrol yekuwedzera. Mukuenzanisa, testosterone mazinga akawedzera 2.9 muzana muboka re placebo.
Chii chinoitika kana iwe ukadya mazambiringa akaomeswa zuva nezuva?
Kudya kwakanaka kwemazambiringa akaomeswa nedhayeti yako yezuva nezuva kunogona kukuchengetedza kubva pakushaikwa kwesimbi. Aya mazambiringa akaomeswa akanyanya kuderera mumacalorie uye anotapira zvakasikwa. Iwo zvakare ane huturu, nekudaro, kubatsira muviri kuti unzwe kuzara kwenguva yakareba nekushandirwa kudiki.
Unogona here kutora yakawandisa resveratrol?
Kana ikatorwa mumadhosi kusvika ku1500 mg zuva nezuva kusvika pamwedzi mitatu, resveratrol iri POSSIBLY SAFE. Yakakwira doses inosvika 3-2000 mg zuva nezuva yakashandiswa zvakachengeteka kwemwedzi 3000-2. Zvisinei, aya mazinga akakwirira e resveratrol anowanzo kukonzera matambudziko emudumbu.
Resveratrol yakaderera testosterone?
Resveratrol inoderedza iwo maratidziro ekutenderera uyerogen preursors asi haina zvainoita pa, testosterone, dihydrotestosterone, PSA mazinga kana prostate vhoriyamu.
Resveratrol Inoshanda Chaizvoizvo here?
Kumwe kutsvagurudza kunoratidza kuti resveratrol inogona kuve yakabatana nenjodzi yakaderera yekuzvimba uye kuvhara ropa, izvo zvinogona kudzikisa njodzi yako yechirwere chemwoyo. Asi zvimwe zvidzidzo hazvina kuwana mabhenefiti kubva ku resveratrol mukudzivirira chirwere chemwoyo.
Chii chinonzi Resveratrol chinoita kumeso kwako?
Yakaiswa pamusoro, resveratrol inobatsira kuchengetedza pevhu, inokanganisa uye inobatsira kudzora zvakashata zvinokanganisa zvakatipoteredza, uye inopenya ineta-inotaridzika ganda. Iyo zvakare ine yakakosha ganda-yekudzikamisa zvinhu izvo zvinogona kubatsira kudzikisa kutaridzika kwekutsvuka
Yakawanda sei resveratrol yandinogona kutora zuva nezuva?
Iyo yakakodzera resveratrol dosage zvinoenderana nebasa iro iro rekuwedzera riri kutorwa. Semuenzaniso, kuwedzererwa kweropa rekuyerera kweropa kunoda vanhu kuti vadye resveratrol mune yakasarudzika 250-500 mg nepo kana yakatemerwa aromatase inhibition, iyo renji inowanzo chengetwa yakatenderedza 500 mg pazuva.
Vanhu vane hutano vanotora resveratrol kunatsiridza hutano hwemwoyo kana kusimudzira hupenyu hurefu vanorayirwa kuti vachengetedze muyero wavo pakati pe150-445 mg. Zvisinei, avo vanotambura nechinetso chipi nechipi vanorayirwa kuti vachengetedze muyero wakadzika pa5-10mg pazuva. Kana iwe uchitambura kubva kune chero mamiriro, ita shuwa yekubvunza chiremba wako usati watanga chero chero mushonga
Resveratrol inorerutsa ganda?
Muzvidzidzo zvemhuka uye mumakiriniki ekuedzwa, 1% resveratrol yakaratidzirwa kudzora pigmentation inokonzerwa neUV kana ichiiswa pamusoro paganda. Iyo resveratrol analogs, RTA neRTG, zvakare yakaratidza ganda remunhu kujekesa mhedzisiro mumakiriniki miedzo panzvimbo dzakaedzwa (04% RTA, 0.8% RTA uye 0.4% RTG).
Iwe unoisa sei resveratrol kumeso kwako?
Green inotaura nezve serum, ishandise mushure mekuchenesa, kana kana iwe ukashandisa toner mune rako rekuchengetedza ganda, saka unogona kurishandisa mushure medanho. Kana iwe uri kushandisa resveratrol mune moisturizer, saka iwe waizoishandisa iko mushure mekuchenesa uye toning, kaviri zuva nezuva, mangwanani nemanheru.
Resveratrol yakanaka kune acne here?
Antioxidantant inonzi resveratrol inowanikwa mumazambiringa uye waini tsvuku inogona kubatsira kubvisa zvakashata kubuda, chidzidzo chitsva kubva kuUCLA chakawanikwa. Vatsvagiridzi pavakashandisa iyo antioxidant resveratrol kune chinetso chehutachiona hunokonzera acne, vakaona ichitadzisa kukura kwezvipembenene zvinoburitsa mburwa kwenguva yakati rebei.
Resveratrol yakachengeteka kune itsvo here?
Ko CoQ10 inokuvadza itsvo dzako here?
Mhedzisiro kubva kuCoQ10 inoita kunge isingawanzo uye yakapfava. Zvinosanganisira manyoka, kuda kusvotwa, uye kurwadziwa pahuro. Ngozi. Vanhu vane chirwere chisingaperi chakadai sekutadza kwemoyo, itsvo kana chiropa matambudziko, kana chirwere cheshuga vanofanirwa kungwarira kushandisa ichi chinowedzera.
Ndezvipi zvekudya zvine resveratrol yakakwira?
Inowanikwa mune zvekudya senge nzungu, pistachios, mazambiringa, waini tsvuku uye chena, bhuruu, cranberries, uye kunyange cocoa uye chokoreti yakasviba. Zvirimwa zvinobva izvo zvekudya izvi zvinogadzira resveratrol kurwisa hutachiona hutachiona, ultraviolet radiation, kushushikana, uye kukuvara.
Ndeapi mavitamini anonetsa pane itsvo?
Mavhithamini ane mafuta akasimba (A, D, E uye K) anogona kunge achivaka mumuviri wako, saka izvi zvinodzivirirwa kunze kwekunge zvatemwa nachiremba wako weitsvo. Vitamini A inonyanya kunetsekana, sezvo zvine chepfu zvinogona kuitika nemishonga yezuva nezuva.
Ndezvipi zvekudya zvinobatsira kugadzirisa itsvo?
Hove ine mafuta.
Rima mashizha mashizha.
Is Resveratrol Yakachengeteka?
Resveratrol yakatorwa mumadhidhiti kusvika 1500 mg zuva nezuva kuburikidza nemuromo inoonekwa seyakachengeteka. Iyo nguva yekudya, zvisinei, haifanirwe kupfuura mwedzi mitatu. Yakakura doses muhuwandu 3-2000 mg zuva nezuva inogona kutorwa asi ivo vanozivikanwa kukonzera matambudziko emudumbu.
Vakadzi vane pamuviri uye vanoyamwisa vanofanirwa kutora zororo reveratrol muzvishoma. Nekudaro, ivo vanofanirwa kuedza uye kutora yavo inodikanwa resveratrol dosage kubva kune zvakasikwa masango, senge mazambiringa ganda uye mazambiringa mazhanje. Waini haifanirwe kudyiwa neiri boka.
Vanhu vanotambura nekubuda ropa vanofanirwa kugara kure neresveratrol sezvo ichinonoka kufambisa ropa. Saizvozvo, vanhu vanotambura nemahara-anotapira mamiriro, akadai se ovarian, uterine, kana kenza yemazamu vanofanirawo kugara kure neresveratrol supplements.
Malbec yakanaka here kumoyo wako?
Malbec mazambiringa ane mamwe ematehwe makobvu emarudzi ese ewaini-mazambiringa. Izvi zvinoreva kuti vakaremerwa ne resveratrol antioxidants inova kiyi yehutano hwemwoyo uye immune.
Inogona here Resveratrol kukonzera musoro?
Takaratidza kuti resveratrol inoshanda nekusimudzira endothelial vasodilator basa, izvo zvakaita kuti vamwe vataure kuti resveratrol muwaini tsvuku inogona kunge iri chikonzero chemigraine.
Ndeipi mhedzisiro mhedzisiro yekutora resveratrol?
Resveratrol haitaridzike semhedzisiro panguva pfupi-dosi (1.0 g). Zvikasadaro, pamiyero ye2.5 g kana kupfuura pazuva, mhedzisiro inogona kuitika, senge kusvotwa, kurutsa, manyoka uye kusagadzikana kwechiropa kune varwere vasina-doro doro mafuta echiropa chirwere
Chii chinonzi resveratrol chinoshandiswa kurapa?
Kuwedzera kukurumbira kweververatrol kunogona kuve kunokonzerwa nekusiyana kushandiswa kwechigadzirwa ichi. Resveratrol inobatsira inowedzera kurasikirwa uremu muvanhu vakuru zvakare inosimudzira ganda rakanaka. Resveratrol supplements, kana yakatorwa pamberi pekuzorora, zvakare unowedzera mabhenefiti anoenderana nekurovedza muviri zvakanyanya. Kutsvaga kwakaratidzawo kuti Resveratrol inoderedza ropa uye nekuvandudza kuyerera kweropa. Inowedzera insulin kunzwa uye saka, inoonekwa sechinhu chakanaka chekuwedzera kune vanhu vane chirwere cheshuga. Iyo inosimudzira hutano hwemoyo nekudzikisira triglycerides. Chekupedzisira, inoderedza chiitiko checancer cancer uye iri mushonga unoshanda kunorwisa arthritis isinga pende uye yakabatana pendi.
Resveratrol inoderedza estrogen here?
Resveratrol yakaratidzirwa kudzvinyirira kuwanda kweese ER-akanaka uye asina kunaka maseru emukenza wemazamu mumasero tsika masisitimu. Inoita saestrogen agonist kana anopikisa zvinoenderana nesero mhando, estrogen receptor isoform, uye kuvepo kwemagumo esrogens
Ndezvipi zviratidzo zvekuti pane chakakanganisika neitsvo dzako?
Shanduko mukuwanda kwaunoita weti.
Pee inoputika, ine ropa, yakasvibiswa, kana kuti tsvuku.
Marwadzo paunenge uchidongorera.
Kuzvimba mumaoko ako, mawoko, makumbo, makumbo, kutenderedza maziso ako, kumeso, kana dumbu.
Makumbo asina zororo panguva yekurara.
Joint kana pfupa kurwadziwa.
Marwadzo ari pakati-kumashure uko itsvo dziripo.
Iwe wakaneta nguva dzose.
Ndinogona here kutora resveratrol nedambudziko retachiona?
Iyi data inoratidza kuti resveratrol is inhibitor yekutaura kweNIS uye mashandiro mune akajairwa maseru etachiona. Uyezve, resveratrol inoita kunge iine basa sekushungurudzika kwetachiona, uye nekudaro isu tinopa chenjedzo nekumedza yakawanda resveratrol.
Ndeipi iyo yakanaka fomu resveratrol?
Waini tsvuku ine yakanyanya kusangana resveratrol yezvikafu Izvi ndezvekutenda kuwanda hwenguva yemazambiringa makanda anoshandiswa mukuvirisa kuita waini tsvuku. Kuvapo kweResveratrol muwaini tsvuku ndechimwe chikonzero iwe ungangove wakazvinzwa zvichitaurwa kunge moyo-hutano.
Maapuro ane resveratrol here?
Chikwata chevaongorori paWashington State University chakaburitsa pachena kuti mazambiringa, mablackberries, raspberries, mastrawberry nemaapuro, vakapfuma mu resveratrol, vanopisa mafuta zvakanyanya. Heano maitiro. Iyo nzira nyowani yekudzivirira uye kurapa kufutisa iri mune antioxidant inowanikwa mumichero yakawanda: resveratrol.
Ndinofanira Kutenga kupi Resveratrol Powder mu Bulk?
Nevanhu vanova nekuwedzera uye nekuziva nezve mabhenefiti e resveratrol, kudiwa kwe resveratrol zvinowedzera zvakawedzera zvakanyanya mumusika. Izvi zvakatungamira kumakambani ekugadzira achikwikwidzana kuti agadzire zvemhando yepamusoro zvekuwedzera kuti vatore chikamu mumusika. Kana iwe uri wehutano hwekuwedzera marongero ekuda kuisa mune resveratrol inowedzera musika, unofanirwa kuona kuti uri kuwana yepamusoro-soro resveratrol poda. Kutsvaga mhando yemhando yepamusoro ndiro danho rekutanga mukuona kubudirira kwebhizimusi chero ripi zvaro.
Kana iwe uri kutsvaga nzvimbo yeku tenga resveratrol powder muhuwandu, iyo imwe kambani yaunogona kuvimba nayo nekutsvaga zvisvinu zviri Cofttek. Iyo kambani, nekuda kwechikwata chayo chakasimba chekutsvaga uye nedhipatimendi rekutengesa rakazvitsaurira, yakagadzira huvepo hwepasirese mune inguva pfupi-yenguva - ine vatengi uye vanobatirana pasirese. Iyo resveratrol inogadzirwa nekambani inouya mumabatch makuru e25 kgs uye inotorwa kubva kune epamusoro-soro zvigadzirwa, nekudaro ichivimbisa kuti zvinowedzerwa zvinogadzirwa kubva kwazviri zvinogona kuvimbwa zvemhando uye kushanda. Kana iwe uchida kutenga resveratrol muhuwandu, iyo chete nzvimbo yekutenga ndeye cofttek.com.
(1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos, María Marhuenda-Muñoz, Carolina E. Storniolo, Anna Tress ter-Rimbau, Anna Vallverdú-Queralt naRosa M. Lamuela-Raventós1 (2018) Hutano Mhedzisiro yeReververrol: Zvakanakira kubva Kuvanhu Kupindira Miedzo, Nutrients.10 (12)
(2) Bahare Salehi, Abhay Prakash Mishra, Manisha Nigam, Bilge Sener, Mehtap Kilic, Mehdi Sharifi-Rad, Patrick Valere Tsouh Fokou, Natália Martins, naJavad Sharifi-Rad (2018) Resveratrol: ibakatwa rakapetwa kaviri muhutano hutano. 6 (3).
(3) Adi Y. Berman, Rachel A. Motechin, Maia Y. Wiesenfeld & Marina K. Holz (2017) Iyo yekurapa ingangoita yeververatrol: kuongororwa kwemakiriniki miedzo, npj Precision Oncology vhoriyamu 1, Chinyorwa nhamba: 35 edn.
(5) Rwendo rwekuongorora egt.
(6) Oleoylethanolamide (oea) -iye mashiripiti wand ehupenyu hwako.
(7) Anandamide vs cbd: ndeipi iri nani kune hutano hwako? Zvese zvaunoda kuti uzive nezvavo!
(8) Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nicotinamide riboside chloride.
(9) Magnesium l-threonate inowedzera: mabhenefiti, muyero, uye mhedzisiro.
(10) Palmitoylethanolamide (pea): mabhenefiti, muyero, mashandisiro, kuwedzera.
(11) Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora phosphatidylserine (ps).
(12) Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13) Iyo yakanakisa nootropic yekuwedzera yealpha gpc.
(14) Iyo yakanakisa yekurwisa-kukwegura chinowedzera chenicotinamide mononucleotide (nmn).